အမည်မဖော်လိုရင် မဖော်ရဲရင် ‘ ရဲ ‘ မလုပ်နဲ့လို့ …ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ..လင်းလင်းပြော – ရွှေအလင်း
ပ ရိ သတ်ကြီးရေ လတ်တလောလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေမှုငြောင့် လူတိုင်းဝမ်းနည်းနေကြတာကို မြင်တွေ့နေရတာပါ။ ဒီလိုအမှုတွေပပျောက်အောင်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကြိုးစားနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း နေပြည်တော်က သမီးလေး Victoria ရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အနုပညာရှင်များသာမက ပြည်သူများကပါ တစ်တက်တစ်အားပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လင်းလင်းက “မည်မဖော်လိုသူ ရဲတစ်ဦးက မီဒီယာတစ်ခုကို ပြောတယ်ဆိုတာ တရားဝင်ပြောတာလား? တရားမဝင်ပြောတာလား? သိချင်တာ။အဲဒီသတင်းအမှန်ဆိုရင် ပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်။
အမည်မဖော်လိုဘူး အမည်မဖော်ရဲဘူး ဆိုရင် ခင်များ ‘ရဲ’ လုပ်မနေနဲ့လေ။
ပြီးတော့ ဒီအမှုက ‘ မရိုးစင်းဘူး၊ မလွယ်ဘူး ‘ လို့ အဲဒီအမည်မဖော်လိုတဲ့ ရဲတစ်ဦးကပြောတယ်ဆိုတော့ လွယ်သွားအောင် ကျွန်တော်အကြံပေးကြည့်မယ်။
” မတရားလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးနေရာမှာ ခင်များ သမီးနဲ့အစားထိုးလိုက်လေ ” ။
ဒါဆို အရမ်းခက်ခဲနေတဲ့ဒီအမှုဟာ အရမ်းလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်။
ဟိုးတလောက မန္တလေးစက်မှုနားမှာ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့တင်သွားပြီး မေမြို့အတက်နားမှာ လူမဆန်စွာမုဒိန်းကျင့်၊ သေမလိုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ မုဒိန်းကောင်ကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖမ်းပေးတဲ့ မန္တလေးကတာဝန်ရှိရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နေရာချိန်းမလား။
အမှုလဲ လိုတာထပ်ပိုကြာနေသလို အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရဲ တစ်ဦးကြောင့် အခြားတာဝန်ရှိ ရဲ တွေပါရောပြီး သိက္ခာကျနေတာ ရှက်စရာကြီး။
ကြိုက်တဲ့ရှေ့နေ ၊ကြိုက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကြိုက်သလောက်ရက်ကိုဆွဲ။ ဒီအမှုပြီးတဲ့ထိစောင့်မယ်။
လင်းလင်း အမည်ဖော် ရေးသည်။
ပ ရိ သတျကွီးရေ လတျတလောလူမှုကှနျယကျပျေါမှာ သကျငယျမုဒိနျးမှုတှမေကွာခဏဖွဈပှားနမှေုငွောငျ့ လူတိုငျးဝမျးနညျးနကွေတာကို မွငျတှနေ့ရေတာပါ။ ဒီလိုအမှုတှပေပြောကျအောငျလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနကွေိုးစားနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာလညျး နပွေညျတျောက သမီးလေး Victoria ရဲ့အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးအတှကျ အနုပညာရှငျမြားသာမက ပွညျသူမြားကပါ တဈတကျတဈအားပါဝငျကူညီဆောငျရှကျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
လငျးလငျးက “မညျမဖျောလိုသူ ရဲတဈဦးက မီဒီယာတဈခုကို ပွောတယျဆိုတာ တရားဝငျပွောတာလား? တရားမဝငျပွောတာလား? သိခငျြတာ။အဲဒီသတငျးအမှနျဆိုရငျ ပွောစရာတဈခုရှိတယျ။
အမညျမဖျောလိုဘူး အမညျမဖျောရဲဘူး ဆိုရငျ ခငျမြား ‘ရဲ’ လုပျမနနေဲ့လေ။
ပွီးတော့ ဒီအမှုက ‘ မရိုးစငျးဘူး၊ မလှယျဘူး ‘ လို့ အဲဒီအမညျမဖျောလိုတဲ့ ရဲတဈဦးကပွောတယျဆိုတော့ လှယျသှားအောငျ ကြှနျတျောအကွံပေးကွညျ့မယျ။
” မတရားလုပျခံလိုကျရတဲ့ ဗဈတိုးရီးယားလေးနရောမှာ ခငျမြား သမီးနဲ့အစားထိုးလိုကျလေ ” ။
ဒါဆို အရမျးခကျခဲနတေဲ့ဒီအမှုဟာ အရမျးလှယျကူသှားလိမျ့မယျ။
ဟိုးတလောက မန်တလေးစကျမှုနားမှာ သမီးလေးတဈယောကျကို ဆိုငျကယျနဲ့တငျသှားပွီး မမွေို့အတကျနားမှာ လူမဆနျစှာမုဒိနျးကငျြ့၊ သမေလိုလုပျထားခဲ့တဲ့ မုဒိနျးကောငျကို ရကျပိုငျးအတှငျး ဖမျးပေးတဲ့ မန်တလေးကတာဝနျရှိရဲဝနျထမျးတှနေဲ့ နရောခြိနျးမလား။
အမှုလဲ လိုတာထပျပိုကွာနသေလို အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရဲ တဈဦးကွောငျ့ အခွားတာဝနျရှိ ရဲ တှပေါရောပွီး သိက်ခာကနြတော ရှကျစရာကွီး။
ကွိုကျတဲ့ရှနေ့ေ ၊ကွိုကျတဲ့တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ကွိုကျသလောကျရကျကိုဆှဲ။ ဒီအမှုပွီးတဲ့ထိစောငျ့မယျ။
လငျးလငျး အမညျဖျော ရေးသညျ။
နောက်ဆုံးနှစ် ….စာမေးပွဲအောင်လို့… ပျော်နေတဲ့ ….စိုးပြည့်သဇင်
သွေးတိုးလို့.. စိတ်မညစ်နဲ့တော့ဗျာဆိုတဲ့… သွေးတိုးရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ ဆေးနည်း
အသက်ငယ်ပေမယ့် အချောင်လိုချင်စိတ်မရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရဲ့ ကျောက်ပွဲစား ပိစိလေး !!!
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ..ဇင်သဲနိုင်တို့မိသားစု… ဆွေးနွေးမှုကို Live လွှင့်ပြ
ကြည့်ရှုသူ ၈ သိန်းကျော်သွားတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး မေလသံစဉ်ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်...